Aza manandrana manova olona; tiavo fotsiny izy ireo. Ny fitiavana no manova antsika. - Anony - Quote Pedia
Mitovy ny zavatra rehetra nefa samy tsy manam-paharoa isika rehetra. Isika rehetra dia misy zavatra mampiavaka antsika amin'ny ambiny. Rehefa mametraka fifandraisana isika, hitanay fa tsy mitovy ny olona amin'ny mety ho nantenain'izy ireo.
Ny toetrantsika voajanahary dia ny hanovana azy ireo amin'ny fanondro ireo rehetra manelingelina antsika. Fa tsy izany no lalana azo iaingana. Ny olona iray hafa dia hahatsapa fa manondro ny hadisoany ianao ary manohitra ny fanekena na dia misy lesoka diso ananany aza.
Tokony hanaiky koa isika fa misy lesoka rehetra. Raha tokony hiampanga na hanondro izany isika dia samy hahatsapa ho ekena ho an'iza isika. Eny, misy foana ny fanatsarana, ary afaka mifanampy isika amin'ny fandresena azy ireo.
Zava-dehibe ny fitiavana sy mampiseho fitiavana. Izy io no mahatonga antsika hahatsapa hafanana sy maniry. Rehefa tia olona amin'ny fo manontolo ianao dia te hanome azy ireo ny fahasambarana rehetra eto amin'izao tontolo izao. Raha manova zavatra kely momba anao izy, dia hanao an-tsitrapo izany ianao na hanao ezaka farafaharatsiny. Ho hahatonga anao ho tsara kokoa amin'ny dingana izany.
Ny fitsikerana manorina dia fomba tsara hilazana zavatra nefa tsy mandeha ho an'ny olona mora tohina izany, noho izany, mila mitandrina ny fihetseham-pon'ilay olona isika ary raha tena mila manova ny momba azy ireo dia tokony ataontsika. mahita ny hery ao amin'ny fitiavantsika hahatonga izany.
Fitiavana sy fanentanam-panahy
Teny momba ny fitiavana sy ny fiainana
Quotes Fitiavana Tsotra
Quotes tena fitiavana
Ny elanelana ratsy indrindra eo amin'ny olona roa dia ny tsy fifankahazoana. - Anonyme
Ny elanelana ratsy indrindra eo amin'ny olona roa dia ny tsy fifankahazoana. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Mba hanasitranana ratra iray dia mila mijanona tsy hikasika azy ianao. - Anonyme
Mba hanasitranana ratra iray dia mila mijanona tsy hikasika azy ianao. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Raha mbola miresaka momba ny nataonao omaly ianao dia tsy nanao zavatra betsaka androany. - Anonyme
Raha mbola miresaka momba ny nataonao omaly ianao dia tsy nanao zavatra betsaka androany. - Tsy fantatra anarana…
Ny fahatokisana dia zavatra noforoninao rehefa mino ny tenanao ianao. - Anonyme
Ny fahamendrehana sy ny fahaleovan-tena dia mitaky fotoana lavitra amin'ny fiainana. Na inona na inona zava-misy, mino ny…